Samsung yaigona kushambadzira chigaro chekuchaja chakafanana neAirPower | IPhone nhau
Munguva yekuratidzwa kweiyo iPhone X muna Gunyana apfuura, Apple yakatizivisawo kune mamwe madhizaini matsva senge Apple Watch Series 3. Asi kwete izvozvo chete, asi yakafambisirawo chishongedzo chitsva chemidziyo yeBig Apple: iyo AirPower, induction yekuchaja base iyo yataigona kubhadharisa kusvika pamidziyo mitatu panguva imwe chete.
Iyo tekinoroji inoshandiswa naApple inotora yeiyo Qi standard asi ine hunyanzvi mukuti inogona kubhadharisa akati wandei michina panguva imwe chete. Patent yakaburitswa neSamsung inotitungamira kuti tifunge kuti kambani yeSouth Korea inogona kunge ichishanda padanho rekuchaja rakafanana neAirPower, kukwikwidzana neyechimurenga Apple chishongedzo.
Samsung's AirPower?: Iyi patent inovhura yakafanana yekushandisa
Iyo patent yakajeka. Mariri tinogona kuona denderedzwa base mune izvo zviviri zvigadzirwa zvakaiswa uye mune dzidziso ivo vaizobhadhariswa. Iyo dhizaini yakafanana nezvimwe zvisina waya zvekuchaja zvishandiso pamusika asi iwe unofanirwa kuyeuka inova chete patent uye haipe ruzivo rwakawanda nezve dhizaini asi pane kushanda kwechishongedzo.
Iyo yekuchaja base yaizove nayo maviri magnetic induction coils uye imwe magnetic resonance coil. Uku hunyambiri kwaizobvumidza iwo maviri maviri ekutanga machira kubhadharisa chishandiso kuburikidza neyakaiswa, nepo imwe yacho ichizochaja bhatiri rayo zvisina waya kuburikidza nemagineti resonance imaging.
Ichi chishongedzo chinotarisirwa kuenderana neQi standard asi chatisingazive ndechekuti chingangoenderana here neApple zvishandiso, sezvatisingazive kana AirPower, iyo hombe apple's isina waya kuchaja base, ichave inoenderana neyechitatu-bato zvemagetsi zvigadzirwa seSamsung mafoni.
Muchiitiko chekuti Samsung yekuchaja base yakabvumidza kubhadharisa iyo iPhone, chikamu chikuru chevashandisi veApple chaizowana yavo yekuchaja base kubvira mitengo inogona kunge yakaderera uye isingadhuri yepakati yepakati mushandisi muhomwe. Kunyangwe zvakadaro, kunaka kwemagadzirirwo ayo kunofanirwa kuongororwa, pamwe nekushanda kwayo pamwe nemhando yezvinhu zvayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Samsung inogona kuvhura isina waya yekuchaja base senge Apple's AirPower